Mnangagwa to commission rehabilitated Mandamabwe-Chivi Road » Masvingo Mirror
June 27, 2021 June 28, 2021 RASHID SAIDI 0 Comments
MASVINGO-President Emmerson Mnangagwa who is becoming famous on social media for cutting ribbons is set to officially commission the 30km rehabilitated Mahandamabwe-Chivi Growth Point Road this week on July 3, The Mirror can reveal.
Masvingo Province Zanu PF chairman who is also the Minister of State, Ezra Chadzamira announced the news at the Provincial Coordinating Committee meeting held at Great Zimbabwe University School of Education last weekend.
“On July 3, the President will be in Masvingo to commission the rehabilitated Mandamambwe-Chivi Road and we have started preparations for the visit from the highest office in the land,” said Chadzamira.
The 30km stretch which was initially built by the Chinese during the Mugabe era had become dangerous to motorists with unrepairable potholes was rehabilitated by a local company, Bitumen Pvt Ltd.
Bitumen started to work on the road two months ago from Mandamabwe Business Centre to Chivi Growth Point turn off as part of the rehabilitation of Shurugwi-Chivi Road which is characterised by collapsed bridges and washed away stretches.
Meanwhile, at the same meeting, Masvingo Province Zanu PF vice chairman, Rabson Mavhenyengwa said those who were not vaccinated against Covid-19 will not be allowed into their meetings as it shows disloyalty to the party leader, President Mnangagwa who was vaccinated.
“Let’s follow what the President said on vaccination, if you are not vaccinated as a leader it shows you are not honest and you have no loyalty, we will very soon require all those who attend meetings to show their cards or photocopies of vaccination cards,” said Mavhenyengwa.
The meeting which was attended by over 100 delegates was held soon after Vice President and Health Minister, Constantino Chiwenga had banned all gatherings after a spike in infections and deaths in the country due to the virulent third wave of Covid-19 which has hit the continent very hard. https://masvingomirror.com
← Dogs found feasting on a baby
Rega kumanikidzwa →
Covid measures throws rugby team international trip into disarray